Bandowgii Hore Uu Saara Magaalada JigJiga Oo Dib Laga Qaaday | Raadgoob
Bandowgii Hore Uu Saara Magaalada JigJiga Oo Dib Laga Qaaday
Afar maalmood kaddib magaalada Jigjiga waxaa laga qaaday Bandowgii ay horay uga soo rogeen hay’adda amaanka Dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya.
Bandowga ayaa ahaa mid mamnuucayay isku socodka dadka iyo gaadiidka magaalada Jigjiga xiliyada habeenkii si loo sugo amniga, loona xakeemo rabashado dhimasho sababay oo qomiyado ku saleysnaa kana dhacay magaalada.
Sidoo kale go’aanka laga qaaday Bandowga Jijiga ayaa ku soo beegmay xili uu magaalada dib ugu laabtay hoggaamiyaha xisbiga tallada haya ee dowlad deegaanka Axmed Shide oo sheegay in uu la xaliyay wixii khilaafaad ahaa soo kala dhax-galay maamulka kaddib markii ay shir jaraa’id wada jir u qabteen isaga iyo madaxweyne Mustafe Maxamuud Cagjar oo xurguf siyaasadeed soo kala dhax-gashay.
Laga soo bilaabo bishii June sanadkii 2018kii rabashado ka taagnaa Jijiga ayaa laga sheegay in ay ku nafwaayeen dad gaaraya 59 ruux, halka 266 kalana la sheegay in ay ku dhaawacmeen.
Madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ayaa wali xabsi ku jira, sidoo kale waxaa jira dad kale oo ka tirsanaa maamulkiisa oo lagu soo oogay dacwado la xiriira in ay qeyb ka ahaayeen rabashadiihii ka dhacay deegaanka iyo dacadiyo kale oo ka dhan ah Aadanaha.